မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ကြင်နာလာမဲ့ တနေ့ နေ့ အတွက်
ဒီကဗျာလေး ကြိုက်တယ်ဗျာဆက်လက်အားပေးနေပါတယ် :)
I like it too. Nice writing. Rolling.
ကျေးဇူးနော် ကိုချမ်း ၊ ဒါမျိုးလေးတွေ ကြိုးစားပြီး ဆက်ရေးဦးမယ်
ချစ်သူ နင်ချစ်လိုပေမယ့်ငါ့မှာ အပြစ်တွေပိုနေလို့နင်နေလိုပေမယ့်လည်းငါမကြိုနိုင်ခဲ့တာပါ..နင်ရှင်သန်နေချိန်တွေမှာငါလေဆန်ကိုပျံသန်းနေလို့နင်ငိုနေပေမယ့်လည်းငါပြန်မလာလိုတော့ပါနင့်ဘ၀ရဲ့ရှေ့ခရီး ပြီးပြည့်စုံစေဖို့ငါ့ထက်ကြင်နာမယ့်သူ နင်ရှာတွေ့နိုင်ပါစေဟာ….
ကိုရန်ရေ ဟတ်ထိသွားတယ် သက်ဆိုင်သူကများ ၀င်ရေးသွားသလားလို့လေ ပြန် check ကြည့်လိုက်မှ ကိုရန်ဖြစ်နေတယ် သိမ်းထားလိုက်တယ်နော် ကျေးဇူးပါ
very nice. thamudaya
ဟ ဟ .. မိုက်ပါ့ ဗျာ .. နဘေကာရံတွေနဲ့ .. Very Good Poem